Special Section | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Sun, May 27, 2018 | 21:45:23 NST
केप आरबी हिल्टन, साउदी अरेबियामा स्काफफोल्डिङ्को काम गर्दै नेपाली कामदार। तस्बिरः अर्जुन गिरी / साउदी अरेबिया
साउदी अरबले दिएकाे अाममाफीमा सहभागी हुने प्रक्रिया : सेन्टर फर माइग्रेशन एण्ड इन्टर्नेश्नल रिलेशन्स
कतारमा भवन निर्माण गर्दै नेपाली लगायत अप्रवासी कामदार। यस्ता भवन बनाउँदा सामान्य जिआई पातालाई मेसिनले पेलेर चाहिएको नापमा कम्प्युटराइज बिधिद्वारा निकालिन्छ। तस्बिरः गोबिन्द थापा मगर/दोहा, कतार
यो साङ्छु भन्ने साग उत्पादन गर्ने कृषि फार्म हो। यस्ता कृषि फार्ममा थुप्रै नेपाली कार्यरत छन्। तस्बिरः भरत राई / दक्षिण कोरिया
मन्जुश्री सम्बत २८५३ सोनाम ल्होछार मनाउन कतारमा भेला हुनु भएका महिलाहरु। तस्बिरः महेश्वर नेपाल/ कतार
कतारको अल्दफ्नामा एकै कम्पनीमा कार्यरत बिस नेपाली युवाको सुत्ने कोठा। तस्बिरः ‌ओम पराजुली/ कतार
साउदी अरेवियाको ल्यान्डमार्क ग्रुप अन्तरगत बोसीनीमा कार्यरत नेपाली सहितका आप्रवासी कामदार । तस्बिरः ध्रुव थापा/ साउदी अरेविया
काममा जाने समयमा गाडी पर्खिएर बसेका नेपाली सुरक्षा गार्डहरु। यहाँ नेपाली तथा अन्य मुलुकका सुरक्षा गार्ड पनि कार्यरत छन्। त्यसमध्ये नेपाली सुरक्षा गार्ड बढी छन्। तस्वीर: तेजेन लिम्बु/ युएई
रियादमा एक भवनको सिसा सरसफाई गर्दै नेपाली सहितका प्रवासी कामदार। हाउस किपिङ् वा किल्निङ स्टाफमा जाने कामदारले यस्तो भवनको सिसा सफा गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम भए पनि सुरक्षाका बिधिहरु अपनाइएको हुन्छ। तस्बिर : श्याम लामा/ साउदी अरब
दोहा हाइपर-मार्केटमा काम गर्ने नेपाली कामदारको सुत्ने कोठा। एघार धण्टा भन्दा बढि समय काम गरेर फर्केपछि सुस्ताउने ओछ्यान। एउटा कोठामा चौंध जना सम्म बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तस्बिर : पदम राज भट्ट/ दोहा, कतार
साउदी अरब, रियाद स्थित Zaatar w Zeit रेष्टुरेन्टमा कार्यरत नेपाली लगायतका आप्रवासी कामदार। तस्बिरः अभिषेक खरेल/ साउदी अरब
सय मिटर अग्लो "आर्क" बनाउने क्रममा क्रेनको सहायताले सपोर्ट एङ्गल जडान गर्दै। लिफ्टिङ, बोल्डिङ, फिटिङ, वेल्डिङ, स्काफफोल्डिङ जस्ता काम यस्ता अग्ला ठाउँमा पनि हुन्छन। कतारको यो कम्पनीमा चालिस प्रतिशत नेपाली काम गर्छन्। यस्ता काम गर्न शारीरिक परिश्रम धेरै हुने भएपनि सीप सिकेर आए काम गर्न सजिलो र कमाइ पनि राम्रो हुन्छ। तस्बिरः उज्वल देवान/ इलाम (हाल दोहा, कतार)
मलेसियाको एक कम्पनीमा दसैँ मनाउदै नेपाली कामदार। तस्बिर: गणेश खड्का, मलेसिया।
साउदी अरबमा गाडी चलाउने नेपाली कामदार दिउँसोको खाना, रोटी देखाँउदै। दैनिक १२ देखि १४ घण्टा ड्युटी हुने भएकोले कामदारले बेलुका नै खाना बनाएर काममा लिएर जान्छन्। तस्बिर: ड्यानिएल/ साउदी अरब
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामि) को सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई एफ–स्किलले निःशुल्क तालिम दिँदै। सामि परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई लक्षित गरि नि:शुल्क तालिम दिँदै आएको छ। तर सिमित कोटा रहेकाले सबै युवाले निशुल्क तालिम लिन पाउँदैनन्। तस्बिर: एफ–स्किल
साउदी अरबियामा गाडी चलाउने नेपाली कामदार दिउँसोको खाना खाँदै। दैनिक १२ देखि १४ घण्टा ड्युटी हुने भएकोले कामदारले बेलुका नै खाना बनाएर काममा लिएर जान्छन्। अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले त्यसरी लगिएको खाना बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। तस्बिर: ड्यानिएल/ साउदी अरबिया
मलेसियामा मेटल कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार। सात जना नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्। उनीहरु बसको इन्जिन खोल्ने र बनाउने काम गर्छन्। तस्बिर :रोविन राई/ मलेसिया
दक्षिण कोरियाको युयाङ्गमा नेपाली साथै अन्य देशका कामदार कार्यरत तरकारी तथा फलफूल फार्म। तस्बिर: आङ् छिरिङ् शेर्पा, दक्षिण कोरिया
ईपिएसको खारेजीको लागि द. कोरियामा मजदुरहरु एक हुँदै। वर्क परमिट सिस्टम लागू गर्न माग गर्दै भएको र्‍याली र धर्ना कार्यक्रम। अगस्ट २१, २०१६। तस्बिर : बैरागी माइला, भैरवहा (हाल द. कोरिया)
कतार मेट्रो प्रोजेक्टमा कार्यारत नेपालीका साथै अन्य आप्रवासी कामदार । तस्बिर : खेम राज सापकोटा / दोहा, कतार